အလင်းပျိုးမယ့် လက်များ… ~ Nge Naing
Monday, December 21, 2009 ဒီရေ5comments
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ကူးစက်ခံ ကလေးသူငယ်များအတွက် စာနာမှု ကဗျာ ရွှတ်ပွဲ အတွက် ၂၀ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၉ အင်ယားကန်စောင်း စိမ်းလန်းစို ပြေဥယျာဉ်မှာကျင်းပသွားပါသည်။
၂။ မောင်ဖုန်းမြင့် ( အနာဂတ်ရှိ/ ဖြစ်တယ်)
၃။ သူရဿဝါ ( အလင်းပျိုးမဲ့လက်များ)
၄။ မိုးလှိုင်ည (ဆူလွယ်နပ်လွယ် သားကောင်)
၅။ နေနှင်းစက်( လက်ကမ်းလို့ကြိုမယ်)
၆။ လူလိန် (ဖြစ်ရပ်မှန်)
ရ။ မင်းယွန်းသစ် ( မြန်နှုန်းမြင့်စိတ်နဲ့ မေ့မေ့ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်)
၈။ Mirror ( ငါတို့ရဲ့လက်တွေ)
၉။ ဆူးခက်မင်း ( အနာဂတ်မဲ့ လက်များရဲ့မနက်ဖန်)
၁၀။ သူရဿဝါ ( လင်းနေတဲ့အပိုင်းဆို မင်းတို့ပဲလုပ်ထားတာ
၁၁။ မိုးလှိုင်ည ( မှောင်နေတဲ့အလင်း)
၁၂။ မင်းယွန်းသစ် ( မေ့မေ့ဆီ ရေးတဲ့ စာမျက်နှာမှာ ခြစ်ရာတွေဗရပွနဲ့ ) စတဲ့ကဗျာ တွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြပြီ… ကဗျာချစ်သူများပါ ပါဝင်နိုင်တဲ့ ပါဖောင့်မန့်အက် ကဗျာကိုလည်း စုစည်း ရေးစပ် ခဲ့ကြပါတယ်… HIV .. သရုပ်ဖော်.. ပြကွက် တစ်ခုကို ပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်... ကဗျာများကို..
မအိန္ဒြာ ၊ မင်းယွန်းသစ် ၊ သူရဿဝါ ၊ မောင်ဖုန်းမြင့် ၊ သွယ်လင်းဆက် ၊ မိုးလှိုင်ည ၊ Mirror ၊ အမည်မဲ့ HOE ၊ သိုးထိန်း စတဲ့ ကဗျာ ဆရာများက ပါဝင်ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...။ ကဗျာကို မြတ်နိုးကြတဲ့ လူငယ်များနဲ့ ဂျာနယ်လစ်များ.. လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ စိတ်ပါဝင်စားသည့် လူငယ်များ ပါဝင် တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်..။ အဖွင့် သီချင်း အနေနဲ့ တိုချစ်တဲ့ကမ္ဘာ တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေ
သီချင်းကို စုပေါင်း သီဆိုကြပြီး... Michale Lann- Sleeping Child .. သီချင်းနဲ့ ကဗျာရွတ်ပွဲလေးကို အဆုံးသတ် ခဲ့ကြပါတယ်..။
အနာဂတ် (ရှိ / ဖြစ်) တယ်
တစ်လောကလုံးစာ ယူလိုက်ရတယ် (ဒုက္ခသက်သက်)
နုပျိုခြင်း တူညီ ၀တ်စုံတွေ ၀တ်လို့
သူတို့ ပျော်ရွှင်နေကြ …
သူတို့မှာ ရီမုကွန်ထရိုးနဲ့မောင်းလို့ရတဲ့ ကား ရှိချင်မှရှိမယ်
ပြင်မပြီး ပြုမပြီးအဖာတစ်ရာ ကမ္ဘာရှိတယ်
" အနာဂတ်မဲ့လက်များရဲ့မနက်ဖြန် "
အရောင် အနံ့အရသာ အထိအတွေ့
အာရုံ ငါးပါး ခံစားမှု ကိုငါတို့တွေ တစ်စက်လေးမှ မရခဲ့ကြဘူး
အဖြူလား အမဲ လားဆိုတာလည်း သိခွင့်မရခဲ့ကြဘူး
ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှာ အိပ်ခ်ျ အိုင်ဗွီ ပိုး ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်
ကျွန်တော်တို့မှာ ခေါ်စရာ အဖေ မရှိခဲ့ဘူး
ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ခွင့် မရခဲ့ဘူး
ကျွန်တော်တို့မှာ ခေါ်စရာ အမေ မရှိခဲ့ဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ကိုမှ ဘာကြောင့်များ မဲ့စေရတာလဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုမှ ရွေးချယ်ပြီး ဘာကြောင့်များ ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်ရတာလဲ
ဘာကြောင့်များ ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်တွေ တွန့်လိမ် ကြွေမွ ကုန်ရတာလဲ
ကျွန်တော်တို့ ဘာများ လွန်ကျူး ခဲ့မိလို့လဲ ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ ကူးစက် ခံရတဲ့ အရာက အပေါင်းလက္ခာ ပါတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီတဲ့
လူမဆန်ခဲ့ဘူး လူ့ ကျင့်ဝတ် နားမလည်ခဲ့ဘူးလို့
ကျွန်တော်တို့မှာ ပြောခွင့် မရှိခဲ့ဘူး
လူ့ကျင့်ဝတ် မစောင့်ထိန်း ခဲ့လို့လား
ကျွန်တော်တို့ တွေးတော ပိုင်ခွင့် မရှိခဲ့ဘူး
ကျွန်တော်တို့ သွေးတွေ ထဲမှာလေ
စီးဆင်းမြဲ စီးဆင်း နေတာက အပေါင်း ထပ်တင်ထားတဲ့ အိပ်ခ်ျ အိုင်ဗွီ ပိုးတဲ့ ။
လူ့ဘ၀ကြီးထဲကို ကျွန်တော် အလင်းမဲ့စွာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီ
ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက် ရမယ့်လမ်းတွေက မှောင်မှောင်မဲမဲ
ရှင်လျှက်နဲ့ သေနေရတဲ့ ဘ၀ကို ကျွန်တော်တို့ မလိုလားစွာ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ရတယ်
အိပ်ခ်ျ အိုင် ဗွီ (HIV)ပိုးဆိုတဲ့ အပေါင်း ထပ်တင်ထားတဲ့ သတ္တ၀ါက
ကျွန်တော်တို့တွေ အပေါ်မှာပဲ ကွက်ကျားမိုး အဖြစ် ရွာချတာနဲ့ တူပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေ လူဖြစ်ရကျိုး မနပ်ခဲ့ဘူး လူဖြစ်ရကျိုး မနပ်ကြဘူး
လူသား အချင်းချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဆိုတာလေး တစ်ခုတည်းနဲ့
ကျွန်တော်တို့ အပြုံးတွေ ရှင်သန်ခဲ့ရတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာငယ်လေး အလင်းမဲ့စွာ ဖွံ့ဖြိုး ခဲ့ရတယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ လူက မွေးတယ် ဆိုတဲ့
အသိအမှတ် ပြုခံရတာလေးက တစ်ချက်က လွဲရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်က မပီပြင်ဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ဘာလဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မနက်ဖြန်က ဘာလဲ
နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ဆိုတာ သေခြင်း တရားလား ။
ကျွန်တော်တို့ အတွက် အလင်းပျိုးမယ့် လက်များကို မျှော်နေပါတယ် ဗျာ ။
အမည်မဲ့ ( HOE )
အထီးကျန်မှုတွေ တစူတဝေးနဲ့ ရှင်သန်ရတယ်
ကျွန်တော် မသိလိုက်ခင်ပဲ ဒီရန်သူက
ဖေဖေ နဲ့ မေမေ ရေ...........
ဒီလို ကျွန်တော့်ရဲ့ တမ်းတမ်းမက်မက်ခေါ်သံကို
သူတို့ စွန့် ခွာခဲ့ပြီ
ကျွန်တော် မင်းကို မနာကျင်စေရပါဘူးကွယ်
ကျွန်တော်တို့ အတူ ကစားပါရစေ
ကော်ဖီ တခွက် အတူသောက်ခွင့် ငါ့ကိုပေးပါ
နေ၀င်ချိန်ကို အတူကြည့်ခွင့် ငါ့ကိုပေးပါ
ဒီအရာက ကျွန်တော့်် နှလုံးအိမ် မှာလား
ဒီအရိပ်မဲကြီးက ရိုးခနဲ ရိပ်ခနဲ
ကျွန်တော် ဘာများ မှားခဲ့လို့ လဲ
ကျွန်တော် ဘာများ မှားခဲ့ လို့ လဲ..
ကျွန်တော် ဘာများ................................. ၊၊ ၊၊
ကေး ( D O I )
မင်းကိုယ်ပေါ်မှာ ထွန်းညှိလို့ ထားမယ်..........
မင်းပြိုလဲရင် ငါက ထူရမှာပေါ့
လူသား တရားကို နားလည်ရမယ်..........
အပြစ်ကို အပြစ်မှန်း သိရင်
အဲဒီထဲမှာ စိတ်ထပ် မနှစ်ဖို့ လိုတယ်..........
ဘယ်တော့မှ ရှစ်ပါးထက် မပိုပါဘူး
ကံကြမ္မာကို ကလူ ကျီစယ်လို့ ရတယ်..........
ဘဝဆုံးတိုင်း စိတ်ဓါတ် မဆုံး
စိတ်ဓါတ်ဆုံးမှသာ ဘဝက လုံးလုံးဆုံးတာ
Ryan Wayne White ရဲ့သွေးတစ်စက်
တစ်ကမ္ဘာလုံး ရဲပတောင်း ခတ်ခဲ့တယ်..........
မျှော်လင့်ချက်တွေ ဝေနေသူ အတွက်
အနာဂါတ် ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မသေဘူး
မင်းကို ငါတို့ လက်ကမ်းလို့ ကြိုမယ်..........
Ryan Wayne White (6/20/1971 - 8/4/1990) ~ အသက် (၁၃)နှစ် အရွယ်တွင် သွေးသွင်းရာမှ HIV ကူစက်ခံရပြီး ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပိုစတာတွင် Poster Child အဖြစ် ရိုက်ကူး ဆောင်ရွက်ရင်း ရင်ဆိုင်မှု ပေါင်းများစွာဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို သိစေခဲ့သူ။
သွယ်လင်းဆက် ( http://txwelynnset.blogspot.com )
ခေတ်ကိုက ဆူလွယ် နပ်လွယ်ရယ်...
ဆူလွယ် နပ်လွယ် ဖြစ်ဖို့ပဲ တွေးတော ကြံဆ နေကြရ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်ထပ်၊ နှစ်ခါ ထပ်မေးကြည့် နေမိတယ်....။
ဆူလွယ် နပ်လွယ် ခေတ်ထဲမှာ
ကိုယ်တွေကပါ ဆူလွယ် နပ်လွယ် ဖြစ်လို့
ဟိုဘက် နဲနဲတိုးပါဦး လို့
မြေပထ၀ီ အခွံပေါ်မှာ ဘာတွေကို စုပ်ယူဖို့၊
ဘာတွေ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ဦးမလဲ......
ကွဲလွဲတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့
ကိုယ့်ဘ၀ကို ချဉ်းကပ် ကြည့်ခြဲ့ကတယ်
သက္ကရာဇ်ပေါင်း အခု ၂၀ ကျော်။
ခြေထောက်တွေက ခုထိ မခိုင်သေးဘူး ..။
တရုန်းရုန်းနဲ့ ပြန်ထ နေရတုန်း...။
ဘ၀ဆိုတာ ခင်းထားပြီးသား လမ်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်..
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထွင်ပြီး လျှောက်ရင်းက
အပေါ်ရောက်လိုက်၊ အောက်ရောက်လိုက်လဲ ရှိမယ်..
ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ အရပေါ့...
အဲ့သလို အမေ ကပြောတော့
ကျမ အသက် ၆၀ မဟုတ်ဘူး အမေ..
ဘာမှု၊ ညာမှု... ဟိုအမှု၊ ဒီအမှု
ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ကြည့်ဖူးပါရဲ့လား
ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာဖို့ရော အခွင့်အရေး တစ်ခု ရရှိဖူးပြီးခဲ့ပြီလား။
အဲ့ဒါတွေ ဘာအဓိပ္ပာယ် လဲဆိုတာ ငါလဲသေချာမသိသေးဘူး။
အဲ့ဒါတွေ ဘယ်လောက် အတိမ်အနက်ရှိလဲ ငါမသိသေးဘူး။
နေသာသလို နေနေလို့တော့ တို့သမိုင်းက တောက်ပြောင်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
အစေ့ကျရာ အပင်ပေါက်တဲ့ ခေတ်ကလဲ ကုန်လွန်ခဲ့ပြီ..
အစေ့ကျရာ အပင်ပေါက်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့
ငါတို့ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ အာသီသကို ဖြေဖျောက်ဖို့ရာ..မလွယ်ကူလှဘူးထင်ရဲ့....။
လက်တွေက ဂီတကို တီးခတ်တယ်
ငါတို့လက်တွေက မြို့ကို မဖျက်မိဖို့
လက်တွေက ငါတို့အတွက် အရေးတကြီး
လက်တွေဟာ မေတ္တာ တန်ခိုးတော်ရှိရဲ့
လက်တွေနဲ့ မျက်ရည် သုတ်ရမယ်
လက်တွေက မျက်ရည်သုတ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးပဲ
မြန်နှုန်းမြင့် စိတ်နဲ့ပဲ မေမေ့ကို ဆက်သွယ် လိုက်တယ်။
ဟဲလို . .
နှလုံးသားကသာ ခဏ ခဏ ဖျားတာ
နေပူပူ ၊မိုးရွာရွာ သူ့မှာ အကာအကွယ် မပါဘူး မေမေ ။
မေမေရေ . .
လူအဖြစ်ရရှိခဲ့မှုကြီးက ခါးသက်လှပေါ့မေမေ ။
ထိပ်တန်းစာရင်းကပါတယ်တဲ့ မေမေ ။
ကျနော့်ကို ငြိသောဆူးများ ဒီထက်ပိုမို ထက်ရှကြပါစေ
ကျနော် ထိမိတဲ့ ခလုတ်တွေ ဒီထက်ပိုမို အလုပ်ရှုပ်နိုင်ကြပါစေ
အိုးကင်းပူထဲ အလှော်ခံနေရသလိုပါပဲ မေမေ
အထက်မီး အောက်မီးနဲ့ ဖုတ်ခံနေရတဲ့ ကိတ်မုန့်ကြီးပေါ့ ။
ကဗျာတွေတဖွားဖွား ထွက်ကျလာတယ် ။
ဒီနှစ်ထဲမှာ . . . အဆုံးအရှုံးသိပ်များတယ်
ဒီနှစ်ထဲမှာ . . . အချစ်ရေးအဆင်မပြေဘူး
ဒီနှစ်ထဲမှာ . . . ကျနော့်ယာခင်းက အသီးအနှံမဖြစ်ထွန်းဘူး
ဒီနှစ်ထဲမှာ . . . စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်တယ်
ဒီနှစ်ထဲမှာ . . . အလုပ်လက်မဲ့
ဒီနှစ်ထဲမှာ . . . နစ်နစ်နေတယ်
နှောက်နှစ်တွေဆိုရင် စားပွဲမှာ ဓါးမြှောင်စိုက်
ကဗျာနဲ့ပဲ မိုက်တော့မယ် ။
ကျွန်တံဆိပ် တီရှပ်က အသက်ရှုကျပ်တယ် မေမေ ။
ဟုတ်ကဲ့ မေမေ. .
ကျနော်အခု မေတ္တာဧရိယာပြင်ပမှာ ရောက်ရှိနေတာပါ ။ ။
Posted in: ကဗျာ,မျှဝေခြင်း
December 22, 2009 at 3:57 AM Reply
လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်း ဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဘိုး ရှိလှ ပါတယ်ဗျာ .. ကဗျာတွေ အားလုံး ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ပြည်တွင်းက အခြေအနေ တခုကို ဖလှယ်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ...
December 22, 2009 at 7:41 AM Reply
ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ ပါဖောမာန်အတ့် တွေလုပ်တာဆိုတော့ ပိုပြီး အသက်ဝင်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဓာတ်ပုံထဲက HIV ပါဖောမာန့်အတ့် က စိတ်ကူးလေးကောင်းတယ်ဗျာ။ကဗျာရေးသူ အတော်များများကလည်း နာမည်ကြီးတွေပါပဲ။သူရဿဝါကဗျာတွေဆို အရင်ထဲက ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တာပါ။ သူဆိုဒ်က ကဗျာလေးတွေကို သွားငေးနေကြပါ။နောက်ထပ်လဲ ဒီလိုမျိုးကော၊ ဒီထက်သာမယ့် အစီအစဉ်လေးတွေ အစဉ်အမြဲ ဖြစ်ပေါ်လာပါစေလို့ဗျာ။
ကိုဇော်နဲ့ ကိုချမ်းလင်းနေရေ- ကိုဒီရေ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ရေးသွားကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Face book မှာ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ အလွမ်းသယ်နေတာနဲ့ ကွန်ပြူတာကို အိမ်က ကျေးဇူးရှင်နှစ်ယောက်နဲ့ အလှည့်ကျ သုံးနေရလို့ လောလောတယ် ကိုယ်တိုင် ဘလော့မလည်နိုင် အသစ်မတင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ မောင်လေးကိုဒီရေ ပို့စ်လာတင်ထားပေးတာကို တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထဲက ကဗျာတချို့ကို နောက်ပိုင်း သီးသန့် ကဗျာထဲမှာ ပြန်တင်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
December 23, 2009 at 9:36 AM Reply
မငယ်နိုင်ကိုယ်တိုင် တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားတစ် ယောက်တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ...ဒီကဗျာတွေဖတ်ရတာ တကယ်ကို တနင့်တပိုးပါပဲ၊
မိဘခေါ်လို့လည်း လာရသေးတယ်၊ ပြီးတော့ တစ်ဘဝစာ ဒုက္ခပါ အဆစ်ယူလာရတဲ့ ကလေးတွေကို အရမ်းသနား မိတယ်၊ ဒီလိုပွဲမျိုး စီစဉ်တဲ့သူတွေကို တကယ်ပဲ ချီးကျူးလေးစား ပါတယ်ဗျာ...။
December 23, 2009 at 12:53 PM Reply